Viga iyo "notch" yeiyo iPhone X nemapikicha matsva aya | IPhone nhau
Viga iyo "notch" yeiyo iPhone X nemapikicha matsva aya
Kana tichitaura nezve "notch" yaApple kune vashandisi vazhinji vasina kugutsikana zvizere neayo aesthetics uye nzira yakanaka yekuiviga icho chiri chinhu chakareruka sekugadzirisa Wallpaper yechigadzirwa. Mune ino kesi isu tinoda kugovana newe nhevedzano yemapikicha izvo zvichave zvechokwadi ichashanda kuvanza kana kuvanza notch yeiyo iPhone X.
Izvo zvinofanirwawo kutaurwa kuti hazvisi chete zvinoshanda kune vashandisi vane iyo nyowani iPhone X modhi, sezvo iwo ari mapikicha ayo anogona kushandiswa kune chero iPhone, hongu, kumashure mune ese awo mutema. Nenzira iyi, izvo zvinoitika ndezvekuti chikamu chepamusoro cheiyo iPhone X chakavanzika uye chinotipa iyo yese-skrini kunzwa.
Iwo akateedzana e mashure mashanu ayo anoshandiswa kune iyo iPhone 5 / c / s, 6 / s / 7/8, ese Plus mamodheru uye zviripachena iyo iPhone X. Kugadziriswa kwakanyanya ndeye 1125 × 2436, saka ivo vanonyatsokodzera chero chero smartphone kunyangwe isiri iPhone uye kuti ivo vari abstract inoita kuti ive inonakidza kune chero mushandisi.
Iyi nhevedzano yemapikicha anonzi Darkseries nemunyori wayo Daniel korpai, Inopa mushandisi mhando yemashure iyo inoda nekuda kwayo nyore uye pamusoro pezvose musiyano wemavara Muchidimbu, akateedzana mapikicha kune avo vasingade kugara vachishandisa mamiriro akafanana uye kune avo vane iPhone X uye vasingade aesthetics ye "notch" vakakwana.
Muchidimbu, isu tine zvakawanda zvingasarudzwa zveku "viga" iyi tabo mune itsva iPhone modhi, asi pachezvangu nekushandisa kwemazuva ese ini ndinogona kutaura kuti ndinokanganwa kuti iriko, saka zvinonetsa zvishoma. Ehezve, iyo mari yakataurwa naKorpai ichiri yakanaka kune unazvo pane yedu iPhone uye tishandise pese patinoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Viga iyo "notch" yeiyo iPhone X nemapikicha matsva aya
Kana vakatora izvi zvinoshandiswa kuti vazvivanze, ndezvekuti vanhu havadi iyo iPhone X, ndinofunga ichave iri kukundikana, nekuda kwemutengo wekugadzira uye nekusava neiyo ID yekubata.
Sezvazvaive kubva kune yekutanga iPhone… kumwe kutadza!
Zvisinei, panongobuda mhedzisiro yekutengesa unowana "wham", sezvazvinowanzoitika kune vamwe ... Ndine iPhone X, unogona kuifarira zvakanyanya kana zvishoma (ndinoida) asi utaure kuti ichave kukundikana kwekusava nekubata ID ... Chokwadi kusakosha kupindura ...
Dai vanhu vaisada iyo iPhone X, vangadai vasina kuda izvi zvishandiso, nekuti vangadai vasina kuzvitenga pakutanga….
Apple inobhejera paFinsar, vagadziri veVSEL sensors
Apple inoburitsa yekutanga betas yeIOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5